Saxarada jaallaha ah eeyga
Raadinta tayada xayawaanka xayawaanka waa masuuliyada macallin kasta. Kaliya sidan ayaad awood u yeelan doontaa inaad ogeysiiso xadgudubyada waqtigooda oo aad caawiso. Nasiib darro, eeygu laftigeeda kama caban karo calool xanuun iyo caafimaad xumo. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad ka soo baxdo waxa ay ku siin karto baaritaanka.
Sababaha suurtagalka ah ee saxarada huruuda ah ee eeyaha
Haddii eytu ​​hayso saxaro dareere ah oo jaale ah, tanina waxay u badan tahay inay la xiriirto nafaqada. Cuntada dufanka badani waxay keenaysaa jirro dheef-shiid kiimikaaduna, natiijada, isbeddelka midabka iyo joogtaynta saxarada. Badanaa ha ku xayirin eeyga "barar", jiis, subag, iwm. Haddii aad ka soo qaadato cuntooyinka aan loo baahnayn ee cuntada, xaaladda xitaa isbeddeli mayso, waxaad u baahan tahay inaad la xiriirto dhakhtarka xoolaha.
Sabab kale oo aad u culus, oo toos ah oo ka timaadaa (nafaqo-xumada), waxay la xiriirtaa beerka nabaro iyo falaqo-xumada. Waxaa macquul ah, eygu wuxuu ku dhacaa xanuunka foosha ee joogtada ah, taas oo ah cillad fayow, ama hargabka hargabka. Haddii lagu daro midabka huruudka ah, saxarada ayaa leh ur dabacsan oo qumman, tani waxay xaqiijinaysaa ciladda.
Faafinta saxarada jaalaha ah, oo ay ku jiraan qaybo cad oo cuncun leh, waxay leedahay urta acidic, qoyaanku waxay dhacdaa wax ka badan 2 jeer maalintii - taasi waxay muujineysaa cunto diidan oo khalad ah.
Haddii xayawaanka eygu uu huruud noqdo, laakiin la sameeyay, oo aan dareere ahayn, waxay ka hadli kartaa cudurrada mindhicirka weyn, iyo sidoo kale weerarka helminthic. Mararka qaarkood xitaa indhaha qaawan waxaa lagu arki karaa saxarada duleelka ah . Xaaladdan, saxarada huruuda ah ee eeygu waxaa weheliya xabus ama isku dhaf ah xab iyo dhiig.
On nafaqada habboon eeyaha
Asal ahaan, dhammaan sababaha huruuda saxarada ayaa marka hore la xiriirta quudinta aan nidaamsanayn eeyga. Khalad weyn ayaa ah in la isku dayo in laga dhigo dabeecadda ka soo dabiiciga ah khudradda. Nidaamka dheef-shiidka eeyga waxaa loo qaabeeyey in lagu dhajiyo hilibka, sidaas awgeed waa in ay ahaato mid ku jirta cuntada.
Uma baahnid inaad eeyga ku quudiso boorashka iyo khudradda, borotiinka tayada hooseeya ee leh kartoonada, jilicsanaanta iyo unugyada kale ee isku xira, baruurta, iyo borotiinka qudaarta, taas oo aan ku dhicin habka dheef-shiidka eeyga. Noocan oo kale ah culeys aan loo baahnayn beerka, taas oo u eg in la xakameynayo geeddi-socodka halsano ee caloosha, si tartiib tartiib ah u horseeda horumarinta cudurrada.
Maxaa la siinayaa qashinka bil kasta?
Muxuu Mugdigu kuugu jajabinayaa boogaha?
Cunto noolow kalluunka quraaradda
Ku dheji dabeylaha oo leh gacmohooda
Qiyaasta xayawaanka ee bisadaha
Waa noocee cuntooyinka eeyga qalalan?
Koofiyadaha Ragdoll waa la jari karaa - dhammaan suxufiyiinta ee xayawaan fiican leh
Tallaallada bakaylaha - waxa ugu muhiimsan ee ku saabsan irbadaha khasabka ah
Infekshanka infalawansada ee bisadaha - calaamadaha
Jinsiga Faarax ee bisadaha
Saliidda kalluunka ee ka fiican?
Electrocamot ee magaalada ee dadka waaweyn - sida loo doorto?
Fikrado xiiso leh sawir sawir leh
Cuntada lagu kariyo mashiinka luminta, si firfircoon u gubaya dufanka
Man Aries - sida loo fahmo in uu jacayl yahay?
Kaqaybgalinta awoowe / dhalaanka ee korinta ilmo
Cake farmaajo leh tufaax leh tufaax
Qormooyinka loo yaqaan 'Salma Hayek'
Cayayaanka la qalajiyey - waraaqda
Dasha Gauser - Guga-Xagaaga 2014
Bronchiolitis ee carruurta
Cunto leh cognac - fiican iyo xun
Tincture of celandine on vodka - warqadda daawada iyo codsiga
Livadia Palace ee Crimea
Salad oo ah digaag iyo qajaar
Goorma ayay wacan tahay inaad tagto Vietnam?
Sida loo duubo duubka kaabajka?
Dharka gaaban - dharka guud ee dhammaan marxaladaha
Suugo yaryar oo aad u macaan leh jiilaalka